Wholesale Two Tone Captains Bucket Seat Flip up Boat Seat Manufacture and Factory |XGEAR
Iyo Xgear boat captain chair inogadzirwa kubva kune yakanakisa 28oz UV -treated marine-giredhi vinyl, ine optimal ergonomics uye yakakwana curve iyo yakagadzirirwa kukwana muviri wako contour zvizere.
Zvigaro zvebhaketi zvebhoti zvine furo repamusoro-soro, zvitsigiro zvesimbi isina simbi uye yakaomarara epurasitiki backrest, saka inogona kupa rutsigiro rwakanyanya, uye flip-up bolster inogona kuwedzera urefu hwechigaro kuti isangane nezvimwe zvaunoda.
● Material: zvigaro zvechikepe zvekaputeni zvinogadzirwa kubva kune yakanakisa 28oz UV-yakagadziriswa marine-giredhi vinyl ine yakakwirira-density foam padding, chigaro chakakora uye kumashure makushioni zvinopa kunyaradza kunoshamisa.Hinges uye hardware zvinogadzirwa kubva anodized-aluminium.
● Paunogara, unogona kuwana rubatsiro rwakanyanya kuburikidza neyakakwana ergonomically design.
● Stainless simbi fasteners uye yakakwirira simba rotational akaumbwa chigaro chigaro furemu
● Shanda universal 5"x 5" kana 5"x 12" bhaudhi pateni yekukwirisa, masiruuru nekugezesa zvinosanganisirwa.
● The Flip-up bolster inogona kuwedzera urefu hwechigaro kuti isangane nezvido zvako zvakasiyana.Saka iwe unogona kugadzirisa chero kuve neiyo yakaderera backrest kana yakakwira backrest.
● Izvi zvigaro zvechikepe zvekuredzesa zvinokurumidza kuoma uye zviri nyore kuchenesa.
Features Flip-up bolster
Dimensions 23.5"H x 26"D x 20.5"W
Seat Weight 9.3KG
Carton size 24.5"W x 27" D x 21.5"H
CartonGros Weight 10.9KG
Isu tinokupa zano kuti usashandise pazasi zvigadzirwa kuchenesa yako vinyl-yakavharwa chikepe chemukati.
● Bhodhoro kana midziyo inoti "Kwete kushandiswa pavinyl" seFormula 409 uye Turtle Wax/Tar Remover, mamwe akaita seGoo B Gone, Murphy's Oil Soap, Simple Green, DC Plus, Orange 88 Degreaser, Son-of-a-Pfuti. , Bleach/Baking Soda, Harbour Mate, Roll-Off kana zvimwe zvinokuvadza zvinochenesa.
● USASHANDISA parafini, peturu kana acetone, nekuti vanogona kubvisa iyo inodzivirira marine top jasi.
● USASHANDISA chero silicone kana petroleum based products.Kana kuti ivo vanozobvisa mapurasitiki muvinyl, vosiya yakaoma uye brittle, pakupedzisira vanogona kuputika.
Iyo chikepe kaputeni chigaro chatova nemabhoti maburi uye Kukwirisa kwakaringana mwero, iwo anokwirisa screws anosanganisirwa muyuniti.
Iwe unogona kugadzirisa chero kuve neine yakaderera backrest kana yakakwira backrest nekudzora iyo Flip-up bolster.
Zvakapfuura: XGEAR 2 mu1 Foldable Camping Lounge Chair ine Detachable Side Tafura yeCamping Fishing Beach uye Pikiniki.
Zvinotevera: XGEAR Pop Up Nyore Isa 6 padivi Hub Screen Imba / Canopy
Yakaderera Kumashure Kupeta Kuredza Boat Seat
High Back Boat Seat ine Foldable Backrest
New Low Back Folding Boat Seat